Zvese izvo zvinopenya zvirokwazvo aya anopenya mhete
Kana zvasvika pamataurirwo echitaira, mhete hadzimbofi dzakashamisa chero chipfeko. Mhete dzinogona kuwedzera runako kuchitarisiko chako nekukasira. Kubva pa rose goridhe kusvika kune sirivheri, mhete dzemhando dzakasiyana dzakashongedzwa nematombo anopenya uye anopenya, izvo zvinonyatso kusiya pfungwa yakadzika pavanhu. Kubva pachinyakare ...
Yakazvimirira brand zhizha fashoni chic mhete
Kubvira pakumbundirana uye zvindori kusvika kumhete uye maparera, aya mhete ega ega akakwana kwezuva nezuva kupfeka kwezhizha. Kunyangwe isu tiri vateveri vakuru vemarudzi ese ezvishongo-kunyangwe isu tichiri kupfeka mapyjamas, chinhu chinowanikwa chinoita kuti tinzwe "tapedza" ipapo-asi nekuda kwemasks, isu ...
Iwo makumi mashanu akanakisa machete emuchato nemhete dze2021 | Strategist
Chigadzirwa chega chega chinosarudzwa chakazvimiririra ne (chinotarisirwa) mupepeti. Izvo zvaunotenga kuburikidza nehukama hwedu zvinogona kutiwanisa komisheni. Kana zvasvika pazvishongo zvine chekuita newanano, mhete dzekuvimbisa dzinowanzo kuve tarisiro yekutarisisa, asi maringi emuchato haafanire kufuratirwa. Shure kwezvose, “Iyi ndiyo yega pa ...
Mhete inoshamisa yaKate Middleton "nyowani" ine vateveri vanofungidzira
Kunze kwerin'i yake yekuratidzira yekudyidzana uye mhete yemuchato, haawanzo kuona chero chinhu chakapfekedzwa maDuchess eCambridge, asi iye zvakare ane chishongo chinoshamisa checitrine. Kate akangofotorwa akapfeka kashoma - vamwe vacho vaive muna 2018, nguva pfupi mushure mekuzvarwa kwaPrince Louis. Zvanga zviri...
Mhete dzakakodzera kwazvo kumeso kwako: mativi, denderedzwa, denderedzwa, dhayamondi kana moyo
Chirevo Aqua, girini uye bhuruu macocktail mhete yezhizha
Mhete yekudyara yakaita kutanga kwayo muma1920s (funga "The Great Gatsby"), apo fashoni show jewelry yakange yakakurumbira. Muchokwadi, kana zvasvika pamhete dzekudya, iyo yakakura iyo hunhu, iri nani, nekuti inomiririra yakachena runako uye yakachena decadence. Kubva ipapo, ichi chimiro uye mweya ...
Nzira yekuchengetedza sei Goridhe-yakaputirwa Zvishongo Kana Iyo Uchipera?
1. Kana zvishongo zvakafukidzwa nendarama zvisina kupfekwa kwenguva yakareba, zvinofanirwa kupukutwa nejira rakapfava kuti zvidzivirire kusvibiswa nedikita pazvishongo zvokonzeresa kuita ngura, wozoisa muhombodo kana bhokisi rakavharirwa kuti uparadzanise mhepo kudzivirira zvishongo kubva kune oxidizing uye kuita yero uye nhema. 2. Usa ...
Ko Goridhe-rakafukidzwa nezvishongo richapera here?
Ndarama-yakafukidzwa zvishongo ishongedzo yakajairika. Kunyangwe zviri kazhinji kana pane mimwe mitambo yakakosha, vanhu vachapfeka zvishongo zvakafukidzwa negoridhe pamiviri yavo. Kubudikidza neruvara rwegoridhe-rakafukidzwa, ivo zvakare vanoita kunge vanopenya zvakanyanya. Kana isu tichiwanzo kuenda kuzvitoro zvezvishongo kunotenga zvigadzirwa zvakafukidzwa nendarama, isu ...
Ndichine aya ekupedzisira mashoma cuban butterfly chishongo uye cz mhete dzinoisa kumusikana Yakakwana yechipo chaValentine Chipo chisingadhuri mutengo Wakazara Zvakadzika Zvishoma MOQ Kutumira nekukurumidza Simbi huru: ndarira Yakafukidzwa zvinhu: Rhodium uye 18K goridhe Dombo hombe: 5A zirconia (cz ibwe ) Hunhu ...
Muviri Zvishongo, Butterfly Pendant, Sirivha Mutsipa, Butterfly Tennis Chain, Tennis Chain Mhete, Maketani eCuba,